Faankishinoota Kuusdeetaa - LibreOffice Help
1 Fakkeenya Deetaa
2 Ulaagaalee Kuusdeetaa Faankishinii
1 Maqaa Kutaa Umurii Fageenya Mana barumsaattii Ulfaatina
7 Fsadarka 2 7 300 42
13 Maqaa Kutaa Umurii Fageenya Manabarumsaattii Ulfaatinat
Dirreen kuusdeetaa tarjaa iddoo funkishiniin eda ulaagaan bani jedhu hojiira oole fi deetaa tarree filatame adda baasa.ulaagaa bani jedhu wajjin hidhata hin qabu.Deetaa hammangaa hundaa adda baasuu lakkooofsaa 0 fayyadamaa. Tarjaa mala matduree tarjaatiin wabii gochuuf,mallattoo waraabbii matduree irratti olkaa'i.
Tarjaa mala matduree tarjaatiin wabii gochuuf,mallattoo waraabbii matduree irratti olkaa'i.
DSTDEV Istaandaardii diveeshinii ummataa fakkeenya irratti hundaa'udhaan ,lakkoofsota,kuusdeetaa tarjaa keessaa fayyadamuudhaan haala walgituun shallaga.Kuusaan akka fakkeenya deetaatti eegama.kana jechuun daa'imman fakkeenya irratti fudhataman amala daa'imman hundaa qabu.Hub.firiin bakka bu'u fakkeenya 1000 gad ta'uu hin qabu.
DVAR vaaraansii man'ee hundaa kan dirree kuusdeetaa galmee hundaa keessa jiru kan ulaagaa barbaachisaan wal gitu deebisa.Galmeen fakkeenya irraa argame akka fakkeenyatti ilaalama.Firiin bakka bu'u fakkeenya ummataa 1000 gadi ta'uu hin qabu.
Ulaagaa dirree kuusdeetaatiif man'ee tarjaa ibsametti galchuuf ni dandeessu.Ykn kuusdeetaa hundaaf lakkoofsa 0 galchi.Jijjiiramaan duwwaa ta'uu hin danda'u.Tarjaa mala matduree tarjaatiin wabii gochuuf,mallattoo waraabbii matduree irratti olkaa'i.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=3.6/Calc/Database_Functions/om&oldid=494007"
This page was last edited 23:47:52, 2013-04-08 by LibreOffice Help user WikiSysop.